Nahoana no nifidy antsika - Ningbo Yobo SCM Co., Ltd
Baby Walker fiadiana
Back Seza mpikarakara
Car Seza Cover ho an'ny biby
Car Seza Protector
Car Fako Bin
tarehy harona / Wash kitapo
Stroller sy nandamina
Mitandrina izahay tsy manam-paharoa sy ny fampandrosoana ny vokatra isan-karazany usefull ahitana ray aman-dreny vaovao ny zava-drehetra tokony hahatonga ny fiainana sy ny zaza mampahazo aina kokoa ny fiainany!
Ny vokatra isan-karazany ahitana ny stroller Accessories, fiara Accessories, zazakely fiara seza fanampin-javatra Raha toa ianao ka miandry ny zaza voalohany, na efa lasa ray aman-dreny ankehitriny, dia mety ho mahatsiaro ho tototry ny vokatra rehetra avy ao, ary izay rehetra misy ny safidy.
Marina fa manana safidy maro, ary dia tsara ny mahalala izay tari-dalana ho lohan'ny amin'ny voalohany, ny zavatra izay nanandrana sy marina. Raha toa ianao eo amin'ny zazakely na mihoatra, ianao ihany angamba nanomboka lisitry ny favoris, raha toa anay ianao, ianao liana foana mba hahitana raha misy zavatra avy any mety hanova ny fiainanao ho tsara kokoa. :)
Nianatra izahay, izay efa tena zaza entana no toerana tena, ary ny sasany Naniry aho dia ho nahafantatra ny amin'ny zazakely! Tamin'ny an-tampon'ny amin'ny lisitra dia tena zavatra izay hahatonga anao isan'andro mora kokoa ny kely kokoa manageable. Izy ireo no zavatra ampiasaintsika rehefa mampitony ny zaza, dia hametraka izany hatory, miezaka ny hahatonga azy ireo ho faly raha aina sy ny zavatra hafa ilainao hatao, ary miezaka ny hanao nandeha ary mandeha toerana kely tsy dia sarotra.
Fa izahay efa nanangona lisitra ho anareo eto, ny tsy maintsy-manana zavatra zaza! Raha toa ianao mitady hevitra, antenaina izany dia ho toerana tsara hanombohana.
Ny zavatra mahafinaritra dia ny ankamaroan'izy ireny dia azo ampiasaina avy amin'ny zazakely iray ho any amin'ny manaraka, ka indray mandeha manana ny, dia matetika no tsy maintsy hividy azy ireo indray.
Raha manana ny tsipiriany famolavolana, dia afaka sample azy avy hatrany, ary manolotra soso-kevitra matihanina mba handavorariana ny famolavolana sy ny teti-bola, raha ilaina.
Raha manana hevitra afa-maizina, dia afaka ihany koa ny sary an-tsaina ny mety indrindra safidy sy hanatsara azy mandra-nifoha ny sary tsara indrindra ho anao.
Isika dia nanolo-tena ho fanomezana ny nanova ny fiainako haingana andro sy miasa mafy mba ho azo antoka fa ny fe-potoana rehetra dia nihaona.
Raha ny tokony, ny santionany dia nanatitra ho maimaim-poana.
Unit B, 16 / F, CKK Commercial Center, No. 289-295 Hennessy RD, Wan Chai, HK